Chii chiri Best VPN yeWindows? - TELES RELAY
HOME » MAZANO • mwe • Featured • TECH & TELECOM • Télécharger Chii chiri Best VPN yeWindows?
Icho chinhu chisingarambiki chokuti Windows ndiyo inoshandiswa pane inoshandiswa kwazvo munyika. Windows haisi kungoshandiswa mumakombiyuta emakombiyuta asi inowanikwawo muhuwandu hwemakombiyuta ega ega nekuda kwekunyoresa kwayo uye nyore nyore kushandiswa nekuenzaniswa nedzimwe nzira dzekushanda. Izvi zvinoita kuti Windows operating system ive chinangwa chikuru chevashandisi uye inoita kuti zvive nyore kutarisana ne-cyber kurwisa. Gore roga roga, tirikuona nhamba inowedzera yekutengesa kweyero, iyo inoda kusachengetedzwa kusina maturo mumasikirwo edu kuchengetedza data yedu yakachengeteka.
Kune marudzi maviri ehuchengetedza software anowanikwa: antivirus uye VPN (virtual manzwiro ehupfumi). Iyo antivirus inopa zvinhu zvinodzivirirwa zvinodzivirira urongwa hwako kubva kunekukudzivirira kwepyber, asi zvakave zvichizivikanwa kuti vanhu vakatanga kutadza kuisa antivirus mumaitiro avo nekuda kwekuoma kwekuvandudza uye sar zvishoma kukwirirana. Heino VPN inokupa nekuchengetedzwa uye kusagadziriswa kugoneka, zvichikubvumira kuti usangonyora zvinyorwa zvako, asiwo kuti uwane zvigadziriswa zviri mumunharaunda yako. Nokuti nzvimbo yako uye huzivikanwa zvakavanzwa uchishandisa VPN, kushandurwa kusingazivikanwi uye kubhengetedzwa kwebhangi zvakakosha.
The software Windows VPN nhamba uye anonyanya basa rako rose rekuInternet. Izvi zvakakosha kuP2P faira kugovana kuitira kuti ISP yako irege kutsvaga mutsva uye zvimwe zvitsva. Inokuchengetedzai kubva kune dzimwe nzvimbo dzisingazivikanwi dzeWi-Fi network uye dzinosunungura mawebhusayithi uye majiroo akavharidzirwa seNetflix.
PureVPN, yekare uye yakakurumbira VPN ine vanopfuura miriyoni miviri yakagutsikana nevashandisi, inopa chimwe chinhu chakasiyana, seInternet Kill Switch, icho chinovimbisa kuchengeteka kwekubatana kwako, kunyange kana kukanganiswa. PureVPN inopawo mhinduro kune dzakajairika DNS dzinodonha muWindows 10. A DNS inokonzerwa inoitika apo kusachengetedzwa kwekuchengetedza kunokonzera kuti chimbo chako chiendese DNS chikumbiro kuIP's DNS server panzvimbo yeDNS inoshandiswa neVPN. PureVPN inovimbisa kuti DNS yako inokumbira haiparidzi kuIPI yako, iyo inonyanya kuderedza ngozi yekuputa.
Mukuwedzera kune zvimwe zvezvinhu zvakataurwa pamusoro apa, PureVPN inopa mari yekugadzirisa zvakare pasi pezuva re31, zvinoreva kuti mushure mekubhadhara, iwe uchava nemwedzi ye1 kuedza nekuongorora maPureVPN. Kana iwe usina kugutsikana, iwe unogona kungozvidzivirira uye uwane mari yako zvakare. Izvi zvinowedzera huwandu hwekutendeseka iyo PureVPN inopa vatengi vayo, iyo inongogoneka kana iwe usingakanganisi pahutano uye nguva dzose unopa maonero kune vatengi vako 24 / 7 pasina kumira.
Nicolas Yenoussi: "Muzviitiko zveJaoundé, kuBenin mukujekesa kwekutora mitero kwakakonzera kufara kwakakwana"
Kushanyira motokari kuti zvibudirire mumhuri mazororo muMorocco
MAZANO: 29 HACKS ANONYANYA KUTAURIRA MAZENYU EMUMWE
PSG - PSG: Al-Khelaifi torpedo iyi fake-nhau kubva kuSpain - FOOT 01
Vanhu: Cyril Féraud mukuchema: "Akaparadzwa nechisuruko nekusuwa", anozivisa kufa kwababa vake
Nharaunda dzeMadokero: 6 Dunhu reZvipatano reHIV nokuda kweKubvongodzwa kwevana Vakaparadzana neChirungu cheAnglophone
PHOTOS. Les Bleues vakakodzera mu quarterfinals: tsvimbo yavo ...
VANHU & VANHU2,498